Home » သတင်း » Puget စနစ်များနှင့် IrisVR AEC ကိုကုမ္ပဏီများအဘို့အ VR-အဆငျသငျ့ Workstation ကယ်ယူမှနည်းပညာမိတ်ဖက်ကြေညာ
Puget စနစ်များနှင့် IrisVR AEC ကိုကုမ္ပဏီများအဘို့အ VR-အဆငျသငျ့ Workstation ကယ်ယူမှနည်းပညာမိတ်ဖက်ကြေညာ
Puget စနစ်များနှင့် IrisVR အဖွဲ့ Up ကိုစိတ်တိုင်းကျ Workstation လွှတ်ပေးမည်
Virtual Reality များအတွက် optimized
Puget စနစ်များ (www.pugetsystems.com) နှင့် IrisVR (www.irisvr.com) ယနေ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း-Level virtual reality စီမံကိန်းများအတွက် optimized ထုံးစံစက်ဒီဇိုင်းအတူတကွအလုပ်လုပ်နေကြရသောနည်းပညာမိတ်ဖက်ကြေညာခဲ့သည်။ ဒီမိတ်ဖက်များ၏ရလဒ်အဖြစ် Puget စနစ်များအထိရောက်ဆုံးနှင့်အထိရောက်ဟာ့ဒ်ဝဲစွမ်းဆောင်ရည်သေချာစေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထုံးစံချမှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက်များကိုလျစ်နှင့်စမ်းသပ်မှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည် - ထို component တစ်ခုအဆင့်အထိ - ဖောက်သည် IrisVR Prospect, စွဲငြိဖွယ်ရာဒီဇိုင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ပူးပေါင်းများအတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့လက်မှတ် VR software ကို run နေပါ။ အဆိုပါ ထုံးစံ VR စက် ယနေ့စတင်ဝယ်ယူဘို့ရရှိနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင်ဒီမိတ်ဖက်၏ရလဒ်အဖြစ်, Puget စနစ်များနှင့် IrisVR တစ် Puget စနစ်များထုံးစံကို Workstation နှင့်အတူပေါင်းစည်း Prospect VR software ကိုအကောင်အထည်ဖော်သူတွေကိုဖောက်သည်များအတွက်နည်းပညာနှင့်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုအရင်းအမြစ်များကိုဝေမျှပါလိမ့်မယ်။ နှစ်ဦးစလုံးကုမ္ပဏီများသည်ဖောက်သည်များမည်သည့်မေးခွန်းသို့မဟုတ်ကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ရန်ရရှိနိုင်ပါသည်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူတစ်ဦးချောမွေ့စွာအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်ဖို့ဒီဇိုင်းဖောက်သည်တစ်ဦးထောက်ခံကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်သူတို့ရဲ့ client များအတွက်အကောငျးဆုံး VR အတွေ့အကြုံများကယ်မနှုတ်နိုင်သေချာသည်။ အဆိုပါ VR software ကိုအပြင်, သင်အလားအလာပြဿနာများရန်သင့်ဖောက်သည်စိတ်ဖိစီးမှု-စမ်းသပ်ပြီးနှင့် Virtual Reality ၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်စံအဖြစ်သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်နေကြကြောင်းအစွမ်းထက်ဟာ့ဒ်ဝဲရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်, "Shane Scranton, CEO ဖြစ်သူနှင့်တွဲဖက်တည်ထောင်သူကပြောပါတယ် , IrisVR ။ "ဒါဟာကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်တော်မူသောကို Workstation များနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲကျွမ်းကျင်သူများနဲ့ကျနော်တို့ဖက်ကိုအရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Puget စနစ်များအတွက်သိသာရွေးချယ်မှုရှိ၏ ကျနော်တို့အလွန်ကောင်းသောလက်၌ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ချပြီးပါတယ်။ "
တစ်ဦးအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် Webinar များအတွက် Up ကို Teaming
အဆိုပါကုမ္ပဏီနှစ်ခု '' သစ်ကိုမိတ်ဖက်များ၏ထောက်ခံမှုခုနှစ်, IrisVR နှင့် Puget စနစ်များလည်းတစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း VR ကို Workstation တည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ဝေမျှဖို့တက် teaming နေကြသည်။ : ဖေဖော်ဝါရီလ 45, 21 အပေါ်တစ်ဦး 2019 မိနစ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ webinar ခုနှစ်တွင်ဝီလျံဂျော့ခ်ျ, Puget စနစ်များ '' Lab မှ Technician အများနှင့် Ailyn Mendoza, ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံ၏ IrisVR ရဲ့ဒါရိုက်တာအပါအဝင်, သင်ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း VR ကို Workstation တည်ဆောက်ခြင်းတို့အတွက်သိရန်လိုအပ်သမျှမှတဆင့်တက်ရောက်လမ်းလျှောက်ပါလိမ့်မယ်
တစ်ဦး VR-အဆင်သင့်ကွန်ပျူတာဖွင့် setting များအတွက် Key ကိုလိုအပ်ချက်များကို;
သင့်ရဲ့အခိုငျအမာအဘို့အညာဘက် VR ဟာ့ဒ်ဝဲရွေးချယ်ခြင်း, သင်သတိပြုမိဖြစ်သင့်လာမယ့်မျိုးဆက် VR ဟာ့ဒ်ဝဲ;
ဘယ်လိုအရင်းအမြစ်များကို (သို့မဟုတ်ဘယ်လိုကန့်သတ်အရင်းအမြစ်များကိုအတူကချွတ်ဆွဲထုတ်ဖို့) ကိုဖြုန်းခြင်းမရှိဘဲ 2019 အတွက် Virtual Reality များအတွက်ဘတ်ဂျက်ခြင်းငှါ၎င်း,
တစ်ဦး VR ကို Workstation တက် setting နှင့်မည်သို့သူတို့ကိုရှောင်ရှားရန်လာသောအခါအကြီးမားဆုံးအမှားလူတိုင်းစေသည်;
တစ်ဦးအိုင်တီလူတစ်ဦးခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦး VR စနစ်အားတက် setting များအတွက်သိကောင်းစရာများ & လှည့်ကွက်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ် webinar ဘို့မှတ်ပုံတင်ရန်, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး info.irisvr.com/how-to-build-an-enterprise-vr-workstation-for-your-aec-firm.
IrisVR ယင်းဗိသုကာအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် VR software ကိုသုံးစွဲဖို့တစ်ခုလွယ်ကူသည်။3စကေး: IrisVR နှင့်အတူ, ဗိသုကာ, အင်ဂျင်နီယာများနှင့် preconstruction အသင်းများကိုချက်ချင်း 1 အတွက်ဒီဇိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်, ပူးပေါင်းဆောင်နှင့်မော်ဒယ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများများအတွက် virtual reality သို့မဆို 1D မော်ဒယ်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။ IrisVR ပိုမိုအမှားအယွင်းများကိုဖမ်းခွင့်ပြုချက်အရှိန်မြှင့်, နောက်ဆုံးမှာဒီဇိုင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ချောမွေ့ဖို့ AEC ကိုကုမ္ပဏီများအာဏာ။ IrisVR ကို HTC Vive, Oculus Rift နှင့် Windows MR ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်နှင့် Revit, Rhino, Sketchup, Navisworks နှင့်လည်း FBX နှင့် OBJ files တွေကိုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်ထံမှ 3D မော်ဒယ်များထောက်ခံပါတယ်။ IrisVR တစ်လလျှင် $ 50 မှာစတင်နှစ်ပတ်လည်နှင့်လစဉ် subscriptions ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအခမဲ့ 45 နေ့တရားခွင်ကိုစတင်ရန်, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး irisvr.com.
Puget စနစ်များ Auburn, WA ၏ဆီယက်တဲလ်ဆင်ခြေဖုံးတွင်အခြေစိုက်နှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ထုံးစံ built ကွန်ပျူတာများကိုအထူးပြုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီဖောက်သည်ရဲ့တိကျတဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုနားလည်အပေါ်လေဆာအာရုံနှင့်အတူစိတ်ကြိုက်အလေးပေး, ငါတို့သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အတော်လေးရှားပါးဖြစ်လာယုံကြည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့်ထောက်ခံမှုကိုဆက်ကပ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ဟာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များနှင့်ဘတ်ဂျက်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှကွန်ပျူတာနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကို client များကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ် Puget စနစ်များအထူးသင်ပြုသောအလုပ်ကိုက်ညီမယ့်စနစ်ကဒီဇိုင်းနိုငျပုံ, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီးကြည့်ဖို့ www.pugetsystems.com.
NAB 2019to Launch Vegas POST မှာ Vegas ကို Creative Software များနှင့် FXhome Partner - ဧပြီလ 9, 2019
FiLMiC Inc မှ NAB 2019 မှာ iOS အတွက် Professional ကအသံကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းတင် App ကိုအတူမိုဘိုင်းရုပ်ရှင်ရုံ Tech မှယဇ်ကိုပြုရမည်တိုးချဲ့ - ဧပြီလ 8, 2019
FiLMiC Pro ကိုမိုဘိုင်းရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ App ကိုနှင့် NAB 2019 မှာရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်စက်ရုပ်နှင့်အတူ FiLMiC Inc မှ complete ပေါင်းစည်းရေး - ဧပြီလ 8, 2019
#IrisVR #PugetSystems AR isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် ထုတ်လုပ်မှု လှံ & Arrows ဗီဒီယို virtual reality VR	2019-02-08
ယခင်: motion ဂရစ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ
နောက်တစ်ခု: အခုတော့ရရှိနိုင် Aja HA5-12G Mini ကို-converter